အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ iPhone 6, 5s, 5c, 5, 4s နှင့်4အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းကဘာလဲ။ ၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီ၏အရသာအပေါ်မူတည်သည်။ App Store တွင်ဂိမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးဂိမ်းကစားသူအများစုနှင့်ရံဖန်ရံခါကစားသမားများအတွက်ထောင်နှင့်ချီသောဂိမ်းများရှိသည်။
၏ဂိမ်းမှ mascotas တူသောပရိသတ်တွေအဘို့ Pou ဒဏ္thာရီရန် ကန်ဒီခရပ်ရှ်ဂိမ်းပေါင်းစပ်ဝယ်ယူမှုများတွင်တစ်နေ့လျှင်ငွေမည်မျှထုတ်ပေးသည် (ဖြစ်ကောင်း၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ဝယ်ယူမှုကိုဖက်ရှင်ဖြစ်စေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်) ။
သငျသညျ၏ဂိမ်းများကိုကြိုက်လျှင် ပလက်ဖောင်း သငျသညျဂိမ်းများကိုကြိုက်လျှင်သင်, အကောင်းဆုံးသူတွေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် RPG သို့မဟုတ် သူတို့ကိုတက်ရိုက် မင်းကနာရီပေါင်းများစွာသုံးနိုင်တယ်၊ ကားများ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်, မဟာဗျူဟာ…ပြီးတော့အများကြီးပိုရုံသင့်ရဲ့ iPhone ကို။
ငါတို့ ငါတို့အကြံပြုပါသည် အခြားရက်စွဲများတွင်အရောင်းရဆုံးစာရင်းတွင်ပါသည့်ဂိမ်းအချို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ CSR ပြိုင်ပွဲ၊ Jetpack Joyride၊ Sky Safari၊ Monument Valley၊ Threes, Leo's Fortune, Dots, Bubble Witch Saga 2, ကတ္တရာ 8: ဝေဟင်Rayman Fiesta Run ခေတ်မီတိုက်ခိုက်ရေး 4: သုညနာရီ, ရယ်စရာငါးဖမ်း, Tiny Wings, Infinity Blade, Plants vs Zombies and Cut the ကြိုး…သင်လပေါင်းများစွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခံစားနိုင်သူများနှင့်အတူစတင်ပါ။
iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ ၁၀ ခု
GeForce Now ကြောင့် ယခု Fortnite ကို သင့် iPhone နှင့် iPad တွင် ကစားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
Apple စက်ပစ္စည်းများနှင့် လပေါင်းများစွာ ဝေးကွာပြီးနောက် Fortnite သည် iPhone နှင့် iPad သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပဲ...
Rainbox Six ဂိမ်းသည် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများတွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
နည်းဗျူဟာမြောက် သေနတ်ပစ်ဂိမ်းဖြစ်သည့် Rainbox Six ခေါင်းစဉ်ကို ဖန်တီးသူ Ubisoft က ၎င်းသည် စက်များအတွက် ဗားရှင်းတစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
Alto ၏စွန့်စားမှု- တောင်တန်းဝိညာဉ်ကို Apple Arcade တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Apple Arcade သည် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့လာပါသည်။ အောင်မြင်မှုနည်းသော်လည်း Apple သည် ဤစာရင်းသွင်းမှုကို ကမ်းလှမ်းရန် ယုံကြည်ဆဲဖြစ်သည်။
Call of Duty Warzone သည် iPhone နှင့် iPad ဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း ချဉ်းကပ်လာနေပါသည်။
iOS နှင့် Android စက်ပစ္စည်းများတွင် Call Of Duty Warzone ရောက်ရှိလာသည်မှာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပေ။
iOS အတွက် Battle Royale 'Apex Legends Mobile' ကို လာမည့်အပတ်တွင် နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံ၌ ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
Apex Legends Mobile ဂိမ်းကို နိုင်ငံပေါင်း 10 တွင် လာမည့်အပတ်တွင် ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါ သတင်းကောင်းပဲ ဖြစ်မှာပါ...
New York Times သည် Wordle ကို ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
နည်းပညာလောကကို ဝန်းရံထားတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် အံ့အားသင့်ရမယ့် အချိန်တွေရှိတယ်။ Apple က ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာ သိလာရပါတယ်...
Fortnite သည် GeForce Now မှတစ်ဆင့် iOS သို့ ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ် မေလတွင် Fortnite သည် မလိုအပ်ဘဲ iOS သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟု သတင်းများကြားခဲ့ရသည်...
PUBG သည် ဤအမျိုးအစားကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ရေပန်းစားလာစေရန် ပထမဆုံး Battle Royale ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်း H1Z1 သည် ပထမဆုံးဖြစ်သည်...
ဤအပလီကေးရှင်းများဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းရှိ ပညာရှိသုံးဦး
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
ဇန်န၀ါရီလ (၆)ရက်နေ့မှာ တရားဝင် နိဂုံးချုပ်တော့မယ့် ခရစ္စမတ်ပါတီတွေ ပြီးဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Lord of the Rings: War သည် ခရစ္စမတ်ကို ဂုဏ်ပြုရန် ပွဲငါးခု ထပ်ထည့်သည်။
developer NetEase သည် JRR Tolkien ၏အလုပ်ခေါင်းစဉ်အသစ်၏ကစားသမားများအားလုံးနှင့်အတူဤခရစ္စမတ်ကိုဂုဏ်ပြုလိုသည်...
Disney နှင့် Nickelodeon ဇာတ်ကောင်များသည် Apple Arcade တွင် ရောက်ရှိကြသည်။
ပြီးခဲ့သောသြဂုတ်လတွင် ဂိမ်းစာရင်းသွင်းသည့်ပလပ်ဖောင်း Apple Arcade သည် ရရှိနိုင်သောဂိမ်းပေါင်း 200 ကိုကျော်သွားခဲ့သည်။ များစွာသော ...